Qingdao Huaxin Group Co., Ltd waxa uu ku yaalaa galbeedka park warshadaha magaalada, Jiaonan, magaalada Qingdao, ayaa ku dhow inay jid saddex haad 100 mitir, Jiaoji tareenka, liuting garoonka diyaaradaha caalamiga ah, bay doon, badda iyo dhulka iyo gaadiidka hawada links hore , meesha aad u sahlan.
Shirkadda la aasaasay sanadkii 1998, waxaa a weheliso naqshadaynta iyo wax soo saarka, wax soo saarka, rakibaadda, iibka iyo shirkadaha Col adeeg si dhow u wada shaqeeyaan. Shubay ayaa bilaabay in ay u sameeyaan saldhig saarka gudaha qalabka mashiinada. Company inta badan shaqaalaha farsamada, maamulayaasha iyo shaqaalaha workshop ay leeyihiin in ka badan toban sano oo waayo-aragnimo wax soo saarka ee technology warshadaha lagu dumiyo.
wax soo saarka ugu waaweyn:
(A) saxan bir taxane QXY, qaraxa muuqaal mashiinka nadiif-up qaraxa toogtay, Q32 dabagal ku toogtay mashiinka nadiif-up, Q37 jillaab taxane nooca godadka qaraxa toogtay nadiifiyo mashiinka, qaraxa Q38, Q48 silsilad taxane deldelnaa toogtay mashiinka nadiif-up, Q69 taxane rail saxan bir, qaab-dhismeedka toogtay mashiinka nadiifinta qaraxa. Q35 nooca turnable, Q76 qaraxa shot taxane mashiinka nadiif-up, QGW tuubooyin bir taxane derbigii dibadda mashiinka nadiif-up, nooca-durbaanka Q31 mashiinka nadiif-up, ciid S11series fiicni.
(B) wax taaj oo kale mashiinka: taxane Z143, taxane Z145, taxane Z146, Z148 taxane
Core toogashada mashiinka: Z86series, ZHTO600 / 700, ZH87series, Z94 taxane
mashiinka Shell muhiimka ah: Z95 taxane
(C) Awoodda wax soo saarka sanadlaha ah ee 3000 in 10000 metric taxane ah ciid cusbi-addoonsi, line-soo-saarka ciid dhoobo.
(D) Ballanqaadka baahida gaarka ah ee isticmaala kala duwan oo ka mid ah-up nadiif ah oo mashiinada maaraysay ciid iyo noocyada kala duwan ee design farsamo, wax soo saarka.
Shirkadda ayaa xoog xoog farsamo, technology-soo-saarka sare, hab la ogaado kaamil ah, nidaamka maamulka iyo nidaamka hubinta tayada adag iyadoo la raacayo shuruudaha caalamiga ah in uu ordo.
Shirkadda Our hogaansamo "sumcadda + tayada + abuurnimo + adeeg" fikradda marketing, technology-soo-saarka sare, shuruudaha tayada adag, kala duwan oo ay ka buuxaan gacanta iyo maamulka. Suuqa -oriented sumcad, adeegga daacad ah sida Faraj.
Shirkadda dhamaan shaqaalaha soo dhaweyn dadka ka soo adduunka oo dhan si ay ugu biiraan, soo dhaweyn macaamiisha cusub iyo wax duug ah in ay yimaadaan oo hanuunin shaqada.